Niala tamin’ny fifanarahana niarahana tamin’ny mpanohitra sy ny Vondrona Eoropeana ny antoko Georgian Dream · Global Voices teny Malagasy
Lazain'ny mpanohitra sy ny fiarahamonim-pirenena ho fanapahan-kevitra politika io
Voadika ny 24 Oktobra 2021 4:38 GMT
“E. Rinkēvičs nihaona tamin'ny filohan'ny Parlemanta Zeorziana Irakli Kobahidze”, sary nomen'ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny Latvian, nahazo alalana CC BY-NC-ND 2.0
Ity lahatsoratra ity dia navoaka voalohany tao amin'ny OC Media. Navoaka indray ato amin'ny Global Voices ny lahatsoratra nasiam-panovana araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Tototry ny krizy politika i Zeorzia nanomboka ny volana Oktobra 2020, raha nifanditra tamin'ny valim-pifidianana parlemantera izay nandresen'ny antoko Georgian Dream ny vondron'ny mpanohitra. Nahavita fifanarahana tamin'ny 19 aprily 2021 ny antoko nifaninana, nanaovan'i Etazonia sy ny Vondrona Eoropeana fanelanelanana. Tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny 28 Jolay, nanambara ny fanapahan-keviny hiala amin'ny fifanarahana ny antoko Georgian Dream.
Raha niresaka tamin'ny mpanao gazety, hoy ny filohan'ny antoko, Irakli Kobakhidze hoe: “Androany, 100 andro taorian'ny nanaovan-tsonia ny antontan-taratasy dia mazava fa efa nahavita ny iraka nampanaovina azy izany ary nahatratra ny fetrany.”
Ny fifanarahana tamin'ny volana Avrily, nosoniavin'ny antoko Georgian Dream sy ny ankamaroan'ny antoko mpanohitra, dia namarana ny ankivy nataon'ny antoko mpanohitra nandritra ny fito volana tao amin'ny parlemanta. Tao anatin'izany ny fanavaozana marobe ara-pitsarana sy mikasika ny fifidianana ary ny tena zava-dehibe, ny fampanantenan'ny antoko Georgian Dream hanao fifidianana parlemantera vaovao raha toa ka latsaky ny 43 isanjaton'ny vato no azony amin'ny fifidianana teo an-toerana amin'ny volana Oktobra.
Nilaza i Kobakhidze rehefa nanambara ny fisintahana fa hitaky fifidianana vaovao izy ireo raha toa ka latsaky ny 53 isanjaton'ny vato no azony amin'ny fifidianana hoavy, saingy “miankina amin'ny fihetsiky ny mpanohitra” ihany anefa izany raha hitan'izy ireo fa mety ny hitsanganan'ny governemantan'ny mpiara-dia. Nampiany fa fihetsika “maha-te hidera” no nataon'ny antoko Georgian Dream tamin'ny fanapaha-kevitra.
Fifanenjanana amin'ny Tandrefana
Hatramin'ny nanaovan-tsonia ny fifanarahana tamin'ny volana Avrily dia nitombo ny tsindry avy amin'ny Vondrona Eoropeana sy i Etazonia noho ny tsy fahombiazan'izy ireo nampihatra ireo fepetra nifanarahana sy ny tsikera momba ny fifehezana ny korontana tamin'ny fankahalana pelaka ny fiandohan'ity volana ity.
Na dia milaza mazava aza ny fifanarahana fa tokony hiato ny fanendrena mpitsara mandra-pisian'ny fanavaozana, dia notohizan'ny governemanta ny fanendrena mampiady hevitra ireo ao amin'ny Fitsarana Tampony.
Tamin'ny 23 Jona, nandefa sioka ny masoivoho amerikana any Zeorzia fa tsy nahatanteraka ny fanoloran-tenany hanao fanavaozana ara-pitsarana “iraisana” ny antoko Georgian Dream.
Tamin'ny 19 APR, nifanaraka ny antoko mpanohitra sy ny GD fa ”hiato ny fanendrena” ary nifanaraka tamin'ny fanavaozana ara-pitsarana feno sy iraisana ary ny lalàna vaovao momba ny fanendrena ao amin'ny Fitsarana Tampony izy ireo.
Tamin'ny fanambarana iray hafa navoaka ny 29 Jolay, hoy ny masoivoho amerikana any Zeorzia hoe:
The United States is deeply disturbed and exasperated by the unilateral decision of the Georgian Dream party to withdraw from the April 19th Agreement, a document established through six months of difficult but collaborative negotiations, and one that gives an urgently-needed way forward for the Georgian people and their democracy.
This decision by the ruling party only creates more political instability for the country and raises questions about Georgian Dream’s commitment to achieving Georgia’s democratic goals, goals that Georgian Dream itself set for the country.
Sahiran-tsaina sy sosotra mafy i Etazonia noho ny fanapahan-kevitra manokana nataon'ny antoko Georgian Dream hiala tamin'ny fifanarahana ny 19 Aprily, antontan-taratasy novolavolaina nandritra ny enim-bolana tanaty fifampiraharahana sarotra nefa niarahana niasa, ary ilay iray izay manome làlana ilaina-maika hirosoan'ny vahoaka Zeorziana sy ny demokrasiany.
Vao maika miteraka tsy filaminana ara-politika bebe kokoa ho an'ny firenena ity fanapahan-kevitry ny antokon'ny fitondrana ity ary mampanontany amin'ny fanoloran-tenan'i Georgian Dream hanatratra tanjona demokratika any Zeorzia, tanjona izay ny Georgian Dream ihany no nametraka azy ho an'ny firenena.
Tao anaty fanamarihana, namaly ny tsikera nataon'ny Tandrefana i Kobakhidze. “Na dia mihoatra ny antsasaky ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko mpanohitra aza no mbola tsy nanao sonia ny fifanarahana, dia hitanay fa tsy mihevitra izany ho ilaina ny mpiara-miombon'antoka iraisam-pirenena amin'ny fanentanana ny mpanohitra mahery fihetsika hanasonia ny antontan-taratasy ary handray anjara amin'ny fampiharana izany,” hoy izy.
Nanitrikitrika ihany koa izy fa tokony hirosoana ny fanavaozana ara-pitsarana sy ny fifidianana na tsy misy fifanarahana politika aza.
Khatuna Samnidze, chair of the Republican Party, said that the Georgian Dream Party's statement was a rejection of Europe and the United States. Other members of the opposition such as Zurab Japaradize, leader of the opposition party Girchi — For Greater Freedom, said, “They realized that they have a zero chance of getting the 43 percent,” in an interview with Interpressnews.ge.
Nilaza i Khatuna Samnidze, filohan'ny antoko Repoblikana fa fandavana an'i Eoropa sy i Etazonia ny fanambarana nataon'ny antoko Georgian Dream. Nilaza ny mpikambana hafa ao amin'ny antoko mpanohitra toa an'i Zurab Japaradize, mpitarika ny antoko mpanohitra Girchi – Ho an'ny Fahalalahana Bebe Kokoa- tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny Interpressnews.ge hoe: “Tsapan'izy ireo fa tsy manana herijika velively izy ireo ahazoana ny 43 isanjato”.
Fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena eo an-toerana miisa 18 eo ho eo no namoaka fanambarana tamin'ny 28 Jolay nitsikera ny fisintahana ary nilaza izany ho hetsika politika:
The decision of Georgian Dream is a way to deepen the pre-election political crisis and polarization and only serves a desire to retain the power, for which the “Georgian Dream” is ready to sacrifice the country's prosperity, Western orientation, democratic development and friendly relations with strategic partners.
Fomba iray hanamafisana ny krizy politika alohan'ny fifidianana sy ny fisaraham-bazana ny fanapahan-kevitry ny Georgian Dream ary natao hitazonana ny fahefana fotsiny, izay hanaovan'ny “Georgian Dream” sorona ny fandrosoan'ny firenena, ny fironana Tandrefana, ny fampandrosoana demokratika ary ny fifandraisam-pisakaizana amin'ireo mpiara-miasa ara-stratejika.
Azia Afovoany sy Kaokazy8 ora izay
Tao anatin'ny krizy ara-politika naharitra nanomboka hatramin'ny volana Oktobra 2020 no nanaovana ny fifidianana teo an-toerana, rehefa nanohitra ny fandresen'ny antokon'ny fitondrana Georgian Dream tamin'ny fifidianana parlemantera ireo vondrona mpanohitra.